Nkwekorita mmadu agaghi agara gi nke oma | Martech Zone
Otu n'ime arụmụka nwere mmasị na m nwere n'otu ọrụ m bụ ịkwụsị ịgbaso ihe onye ọ bụla kwuru na ha chọrọ ma bido ọhụụ. Eziokwu bu na abia big a ga - eke ihe n’enweghi onye ọ bụla na-arịọ maka ya.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji mee ka mmadụ niile nwee obi ụtọ, ị ga-eji ihe ọ bụla ị chọrọ iji nweta ọre ahịa ọzọ, soro asọmpi ahụ, tinye atụmatụ ndị ị rịọrọ, ma ọ bụ naanị ịmegharị maka ndị ahịa na-eti mkpu. Ga-arụ ọrụ gị ruo ọnwụ.
Enwere m ike ịbịakọta ụfọdụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-adịbeghị anya, mana nke ahụ na-agwụ ike. Ka anyị lee anya na arụsị nke America - ebe ọtụtụ ndị na-atụ vootu karịa na ntuli aka ndị isi, agbanyeghị. Kedu ka ahịa si jiri votu tụnyere arụsị America?
Nde 7 nde
Fọdụ Obi, Carrie Underwood (onye mmeri, oge 4)
Nde 6 nde
Breakaway, Kelly Clarkson (onye mmeri, oge 1)
Nde 3 nde
Daughtry, Chris Daughtry (4th ebe, oge 5)
Nde 2 nde
Daalụ, Kelly Clarkson
Ihe nke Nwoke, Clay Aiken (onye na-agba ọsọ, oge 2)
Carnival Gbaa ịnyịnya, Carrie Underwood
Nde 1 nde
Obi, Ruben Studdard (onye mmeri, oge 2)
Adịkwa Christmas na Lovehụnanya, Clay Aiken
Hapụ Onwe Gị, Fantasia (onye mmeri, oge 3)
December m, Kelly Clarkson
Taylor Hicks, Taylor Hicks (onye mmeri, oge 5)
Achọrọ M Mmụọ Ozi, Ruben Studdard
Josh Gracin, Josh Gracin (nke anọ, oge 4)
Ezigbo Ihe, Bo Bice (onye na-agba ọsọ, oge 4)
Otu Puku Puku Iche, Clay Aiken
Nwa obere obodo, Kellie Pickler (ebe nke isii, oge 6)
Onwuka Chukwueke, Fantasia
Elliott Yamin, Elliott Yamin (nke atọ, oge 3)
Oge isii na nde 30 + mgbe e mesịrị, ọ na-adọrọ mmasị ile anya ndị ụfọdụ n'ime ndị mmeri (na ndị na-efu) bụ. Carrie Underwood na Kelly Clarkson na akaụntụ maka n'elu ọkara ahịa niile.
Nke ahụ ọ na-aga nke ọma? N'ime afọ 6 'ngwaahịa' mere ọkara ahịa niile. Naanị otu n'ime 'ngwaahịa' ahụ bụ n'ezie nkwụsị. (Kelley Clarkson ebe ọ bụ na ọ bụ ya bụ arụsị mbụ.) Abụghị m onye ọnụ ọgụgụ, ma ọ bụrụ na m na-akpa nkata si votes, afọ na ndekọ ahịa record Amaghị m na nke a osobo ọ bụla echiche nke a isii Sigma ịga nke ọma.
American Idol bụ ihe ngosi telivishọn ka mma karịa ka ọ bụ nyocha egwu egwu. Ahịa ị hụrụ bụ n'ezie naanị ekele maka ngosi a na-ewu ewu. Enweghi ihe ngosi, echeghị m na talent ọ bụla gaara ere ọtụtụ ọba dị ka ha mere.
So Dị Ugboro
N'ụtụtụ a, ahụrụ m ajụjụ ọnụ ebe Carly Simon kasie Brooke White na inweta buut n'abalị ikpeazụ. Carly gwara ya ka ọ gaa n’ihu na-eme ihe ọ na-eme. Ọbụna Carly kwuru na ụdị nke Brooke nke kụrụ ya bụ nke kachasị mma ọ nụtụrụla.
Ndụmọdụ Carly bụ nke a (akọwapụtaghachi ya):
Onye mmeri nke American Idol abụghị ihe kachasị mma ma ọ bụ ihe kachasị iche, ọ bụ ihe kachasị ewu ewu.
The talent ha na-ekpochapụta anya niile ma na-eme otu (Daughtry adabaghị ụgwọ ahụ ma ọlị!), Ma onyinye pụrụ iche bụ ebe ọ dị. Ọ bụ ndị na - ese ihe ga - adị ndụ - ndị ọzọ nwere ike ọ ga - apụ n'anya (ụfọdụ enweelarị!).
Kedu ihe Bob Dylan ga-eme na arụsị America? David Bowie? Na-agba agba? Ejighi m n’aka na onye ọ bụla n’ime ha gaara agba mbụ. Ọ bụ ụdị onye ha kpaliri, ọ bụghị ike ha dị mma na igwefoto ma kụọ ọkwa dị elu maka sekọnd ole na ole. Anaghị m ewere ọnụ ala gbaa na talent na arụsị - ha bụ ndị incredibly nkà ndị na ha kwesịrị ha ohere na-eme ka ọ nnukwu. Anaghị m akụ aka nke talent. Ana m akụ usoro a ga - esi kpochapụ arụsị ndị America na afọ ọ bụla.
Idol nke America bara uru dika ulo oru zuru oke. Ihe ngosi telivishọn bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ọtụtụ afọ. Na ndị niile na ọkụ, pịa, na-ege ntị size, wdg, Arụsị kwesịrị nwe Chaatị Billboard. Ma arụsị ndekọ ahịa na-anọgide na-ojuju. N'ihi gịnị? Maka na afọ n’afọ, ha na-eji nkwekọrita iji chọta onye mmeri ha.
Tags: peeji nke ibu ogePageload ogeomume mgbasa oziọsọ weebụ
Ozi ịntanetị anaghị enweta? Tinye ndekọ SPF!
Patronpath na-ebupụta ọhụụ ọhụụ ọhụụ
Mee 1, 2008 na 8: 52 PM
Na-akpali post. Echere m na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ ka mma iyingomi ụdị ihe ịga nke ọma, agbanyeghị, ma nwee ezigbo ihe ịga nke ọma na ya. Iji nwee ụdị ihe ịga nke ọma Dylan, ị ga-abụrịrị ihe pụrụ iche, nkà na obi ụtọ. Ọ dịghị mgbe ọ ga-eme karịa ole na ole.
N’ezie ị maghị, ma eleghị anya ọ bụ m. 😉
Mee 2, 2008 na 12: 23 PM
Echere m na ndị folks 'dị nchebe' na -eyingomi ụdị ihe ịga nke ọma mana ejighị m n'aka na ha ka mma. Ozugbo ị nwere ihe nlereanya, ị ga-enwerịrị ezigbo ihe kpatara ị ga-eji nye nke abụọ ma ọ bụ nke atọ ma ọ bụ nke isii. M na-eche ma ọ bụrụ na American arụsị ga-eme nke ọma site na-enwe a mba version otu afọ, a nkume version ọzọ, a hiphop ọzọ… Echeghị m na-enye otu ihe nlereanya kwa afọ na-aga na-azụ ahịa - ọ bụ maa bụghị akwagide ndekọ ọrịre.
Daalụ maka ịza ajụjụ - ọ bụ ezigbo mkparịta ụka!
Mee 1, 2008 na 11: 30 PM
Ọfọn, ọ bụrụ na ihe pụrụ iche bụ ihe ọ ga - ewe iji dịrị ndụ, mgbe ahụ anyị ga - ahụ Taylor Hicks gburugburu ogologo oge. Knowsnye ma ma ọ ga-abụ nnukwu ahụ, mana ọ ga-aga ebe ahụ. Imirikiti n'ime anyị nwere obi ụtọ na ya. Ọ dị iche karịa ihe ọ bụla m hụtụrụla. Hụ olu ya n'anya.
Olu Brookes bụkwa nke na-atọ m ụtọ.
Mee 2, 2008 na 7: 47 AM
Ihe ọchị m na-agwa nwunye m n'abalị ụnyaahụ na American Idol emepụtaghị nnukwu nkwanye ugwu maka oge abụọ. Carrie Underwood bụ nke ikpeazụ (na Simon hụrụ na ọ ga - abụ arụsị kachasị ewu ewu). M na-ama ọtụtụ ndị na-ekiri arụsị America aha ka ha wee nwee aha (n'usoro) ndị mmeri nke American Idol n'elu isi ha. Ihe niile gbasara ewu ewu… n’oge ahụ. Dịka ọmụmaatụ, onye meriri Super Bowl afọ atọ gara aga? Ogologo oge ole ka ị ga-eche banyere nke ahụ?
Warningdọ aka na ntị na-emeghị ihere: Ọ bụrụhaala na anyị nọ na isiokwu nke American Idol, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchị ọchị, lelee saịtị a mụ na enyi m malitere otu izu gara aga. Ọ bụ mkpụmkpụ blog banyere iwu * anyị * chere na ndị niile na-asọmpi kwesịrị ịgbaso: http://ouridolrules.wordpress.com.
Mee 2, 2008 na 12: 30 PM
Iwu Arụsị Anyị dị egwu. M ga-abụ, “Were igwu ala na Simon. Ndị folks ga-eme ntuli aka naanị iji hụ ya iwe na snooty. ” Ime ya mgbe mbido Simonizing gị ga-egbu oge.
Na-na na na gị na ndị ọzọ na kwuru. Saimọn ziri ezi: Carrie; agbanyeghị, a ga m agbakwunye na ọmarịcha ịma mma ya na-eme ka ọtụtụ ewu ewu ya, ọ bụghị naanị olu olu. Amaghị m na ọ ga-abụ Billboard 100 tupu oge a nke vidiyo.
Mee 2, 2008 na 1: 39 PM
O doro anya na ihe ịga nke ọma Dylan abụghị n'ihi na ọ bụ / ọ bụ nnukwu abụ. 🙂
Ngwọta BitWise, Inc.
Mee 3, 2008 na 11: 03 AM
Mgbe afọ mbụ gasịrị, ọ dịghị ihe ọhụụ banyere American Idol. Dị ka m na-echegbu onwe m, ndị ha họọrọ ịnọ na ngosi a bụcha ndị mmeri. Achọpụtara ha na TV wee debanye aha ha!